Puntland oo aqoonsi shaqo siisay shaqalaha kala duwan ee hay?adaha dowladda (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 5, 2013 3:48 b 0
Garoowe, Nvember 5, 2013 – Dowladda Puntland ayaa maanta markii ugu horaysay bixisay kaarar aqoonsi oo loo qaybiyey qaar ka mid ah shaqaalaha ka howl-gala hay?addaha kala duwan ee dowladda.
Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland oo bixisay kaararka aqoonsiga, waxaa ay sheegtay in ay ugu ?ugu talo-gashay in lagu hubiyo shaqaalaha shaqeeya iyo kuwa aan shaqayn darajooyinkooda, ?iyo weliba kuwa labbo hay?addood oo dowladda ka tirsan u wadda shaqeeya.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Puntland Mudane Cabdiweli Xirsi Indha-guran oo xaruunta dhexe ee wasaaradda maanta ilaa lix hay?adood oo kuwa dowladda ku gudoonsiiyey kaararka aqoonsiga, ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horaysay ee Puntland ay bixinayso aqoonsi shaqaale dowladdeed.
?Dhowaan waxaan dhamaystiri doonaa siinta karaarka inta dhiman shaqaalaha Puntland ee aan aqoonsiga shaqo haysan.? Ayuu yiri wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Puntland mudane indha-guran oo ka hadlay howlaha diiwaan-gelinta
Wasiirka duulista hawadda iyo garomada Puntland Xasan xuseen Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey tallaabadan horumarka ee la qaaday, waxaa uu sheegay in aysan jirin meel looga shaqeeyo aqoonsi la?aan caalamka aan joogno.
Dhegeyso: wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Puntland mudane Cabdiweli Indha-guran oo hadlaya